Baarlamaanka oo maanta shaqadiisa ugu dambeeyso – Qaranimo Online
You are here: Home 2016 August 17 Baarlamaanka oo maanta shaqadiisa ugu dambeeyso
Baarlamaanka oo maanta shaqadiisa ugu dambeeyso
Posted on August 17, 2016 by Ali Omar Ghedi | 0 Comments
Muqdisho, August 17, 2016: Xildhibaanada Baarlamaanka ayaa maanta lagu wadaa inay kulan ku yeeshaan xarunta golaha shacabka, kaasoo noqonaya kulankii ugu dambeeyay ee Baarlamaankan 9aad oo waqtigiisa dhamaanaya ila laga dooranayo mid cusub.
Shirka maanta ayaa laga soo saari doonaa qaraar ku saabsan dastuurka, kaasoo qorshuhu yahay in loo gudbiyo dastuurka qabyada ah baarlamaanka 10aad eeimaan-doono.
Xildhibaan Maxamed Cumar ayaa sheegay in maanta oo ah 17 bisha Agosto Xildhibaanada Baarlamaanka ay kulan ku yeelanayaan golaha shacabka, isagoo xusay in kulanka warbixin looga dhageysanayo Guddiga dastuurka iyo wixi ay soo qabteen.
Baarlamaanka hada jira ayaa waqtigiisa ku eg 20-ka Agosto, inkasoo shirkii Madasha wada-tashiga qaran Madaxda dowladda muddo loogu daray oo 50 cisho ah, inta doorashada la gaarayo.
Baarlamaanka hadda jiro, ayaa kulamadiisa ay ahaayeen kuwo gaabis ah, tan iyo wixii ka dambeeyay bishii May markii Madaxweynaha uu xeer uu soo saaray ku meel mariyay go’aanadii Madasha Wada-tashiga qaran ee bishii April la go’aamiyay.
DAAWO: Jidadkii xirnaa mudada dheer ee magaalada Muqdisho oo aan la ogayn sababta xilligaan loo furayo ! December 18, 2016
Baarlamaanka Hirshabeelle Oo Yeelanaya Kulan Aan Caadi ahayn December 26, 2017
Qarax ka dhacay Muqdisho December 22, 2016
Somali Prime Minister “We shall not depart Galkayo until solid peace returns” November 30, 2015